Tirada Suuqyada Soomaliya ee Kordhay Marmaray
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan ayaa soo gabagabeeyey howlihii qadka tareenka ee udhaxeeyay Marmaray Fountain iyo saldhigyada kala go'ida ee Marmaray. Adoo qeexaya iftiinka, '' Tani waxay macnaheedu tahay in duullimaadyada Marmaray la sameeyo daqiiqad kasta oo 10 ah, hadda 5, 7 iyo 10 daqiiqo. [More ...]
La xiriir Marmaray si toos ah Halkalı Khadka ayaa bilaabaya 2018: Maamulaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, Marmaray, Sirkeci, Kazlicesme, Haydarpasa Gar Basin, Khadadka Sogutlucesme iyo Pendik ayaa la baaray. Kuxigeenka Maamulayaasha Guud, Murat [More ...]
Metro ilaa meelwalba metelo dhib: Tram, metro, metrobus iyo adeega Marmaray ee dadkeena lama indhatiri karo. Qanacsanaanta ayaa sii kordha iyada oo dadaallada lagu yareynayo gaadiidka ay kordhayaan. [More ...]
Maxay noqon doonaan saldhigyada tareenada taariikhiga ah
Maxaa ku dhici doona saldhigyada tareenka taariikhiga ah: Mashruuca tareenka xawaaraha sare leh, Xarunta Haydarpaşa way caddahay. Wasiirka Maaliyadda Mehmet Simsek, ayaa tilmaamay, in saldhigga lagu dari doono khaaska ah. Waa hagaag, Gebze-Söğütlüçeşme iyo Sirkeci-Halkalı u dhexeeya [More ...]